As of Wed, 03 Jun, 2020 11:00
अमेरिकी सरकारको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष निगरानी र प्रतिबन्धकाबीच नरोकिएको ह्वावेको विकासको गतिले केही समय विश्राम लिने देखिएको छ । यद्यपी देखिएको गुगल, अमेरिका भर्सेस हुवावे, चीनको असमmदारी सन् २०१९ को दोस्रो चौमासमै वार–पार हुने संकेतका रुपमा पनि हेर्न सकिन्छ ।
अमेरिकी सरकारले सुरक्षाको कारण देखाउदै ह्वावेका मोबाइट सेटहरूको विक्रीमा त यसअघि नै प्रतिबन्ध लगाइ नै सकेको छ । सिंगो अमेरिकामा विक्री गर्न नपाउदा पनि गत वर्षको तेस्रो चौमासमा अमेरिकी कम्पनी एप्पललाई पछि पार्दै सामसुङपछि विश्वकै दोस्रो स्मार्र्टफोन निर्माता कम्पनी बनेको थियो ह्वावे । यो तथ्यांकसँगै हौसिएको ह्वावे गत वर्ष भरको विक्रीमा तेस्रो स्थानमा झरे पनि सन् २०१९ को सुरुको चौमास भने पुनः दोस्रो ठूलो स्मार्टफोन कम्पनी बन्यो । विश्वभरका प्रविधि साइटहरू, ब्लगरहरूले हुवावेलाई अबको स्मार्टफोनको लिडरको रुपमा व्याख्या गर्न थाले । ह्वावेलाई यो खुशी विश्वभर बाँडिरहेकै बेला एन्ड्रोइडले ९० दिनपछि ह्वावेसँगको सम्बन्धमा पूर्ण विराम लगाउने आशय ब्यक्त गरेपछि विश्वको बहस ह्वावेको भविष्यमाथि केन्द्रीत छ ।
गुगलले ह्वावेलाई ९० दिनको समय दिएर अमेरिकी सरकारको निर्देशनमा आएको उसको कदम ‘एन्टि ह्वावे कदम’ आफैमा व्यापार युद्ध र ह्वावे–एन्ड्रोइड द्वन्द्वको ‘अग्नी परिक्षा’ को सुरुवातको रुपमा लिन सकिन्छ । जहाँसम्म नेपाल लगाएत विश्वभरका ह्वावेका प्रयोगकर्ताको अन्यौलताको प्रश्न छ, अहिलेकै अवस्थामा ह्वावेका सेटमा एन्ड्रोइड ९.० र यसका अपडेटहरू निरन्तर आउने नै छन् । नयाँ आउने सेटहरूमा एन्ड्रोइड १० राख्ने वा नराख्ने विषयलाई ९० दिनभित्र ह्वावे र एन्ड्रोइडले निर्धारण गरेपछि मात्र यसै भन्न सकिने विषय हो । अमेरिकी प्रशासनले ह्वावे लगाएतका आफूलाई संकास्पद लागेका कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्दै गरेको छ । खासगरी ह्वावेको फाइभजीलाई अमेरिका मात्र हैन युरोपमा पनि प्रवेश गर्न नदिने मनसायको अमेरिकी सरकारको कदम यही निर्णयलाई पालना गर्दै गुगलले एन्ड्रोइडको अबको अपडेट ह्वावेका स्मार्टफोनमा नदिन सक्ने अवस्था आएको छ । विश्वभर विक्री भइसकेका स्मार्टफोनले एन्ड्रोइडको अपडेट पाउने घोषणा गुगलले गरिसकेको छ । तर, विश्व स्मार्टफोन बजारलाई लिड गर्ने ह्वावेको योजनामा भने पुर्नविचार गर्ने समय आएको छ ।
ह्वावेले गुगलसँग निरन्तरता दिंदा वा नदिंदा पनि आफ्नो ग्राहकलाई असर नपर्ने र भविष्यको व्यापारमा पनि फरक नपर्ने खालको सन्देश दिइरहेको छ । यसबीच चीन सरकारले एप्पललाई रोक लगायो भने एप्पललाई हुने घाटाको खबर पनि प्रविधि साइटमा आइरहेका छन् । यदी यसो भयो भने पनि ह्वावेको स्थान नघट्ने अवस्था पनि आउन सक्छ । किनकी एप्पल बजार पनि घट्न सक्छ । यो सब व्यापारिक र प्राविधिक विषय हुन् । तर, ह्वावे र एप्पल जस्ता विश्वकै उत्कृष्ट कम्पनीहरू चीन अमेरिकाबीचको व्यापार युद्धमा पिसिन सक्ने (शक्तिसाली) घुन बन्ने संकेत घटनाक्रमले दिएका छन् । ह्वावेसँगको सम्झौता रद्द गर्दा गुगललाई पनि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष घाटाको सामना गर्नु पर्ने अवस्था पनि नआउला भन्न सकिन्न । ह्वावेसँगको ब्यापारबाट हुन सक्ने अर्वौं डलरको घाटा अमेरिकी प्रशासनले गुगललाई क्षतिपूर्ति स्वरुप दिने वाला त छैन नै । प्रत्यक्ष सम्झौताबाट ह्वावेबाट लिने रकम भन्दा पनि गुगलका एप्लिकेसनहरू मार्फत् गुगलले विश्वभरबाट ह्वावेका सेटबाट कमाउने विज्ञापन वापतको कमाइ पनि रोकिनेछ । यसअघि हार्डवेयरमा मात्र प्रतिबन्ध लगाउदा ह्वावे वा चीन र अमेरिकासँग मात्र सरोकार राखे जस्तो लाग्ने विषय थियो भने विश्वका उपभोक्तासँग जोडिएको विषय भएकाले अबको कदम चाल्नु दुबै देशका लागि चुनौतिपूर्ण छ । यसअघि पनि ह्वावे अमेरिका चीन ब्यापार युद्धको मियोको रुपमा थियो भने अब दुबै देशको व्यापार युद्धलाई विराम लगाउने विषयमा पनि ह्वावे विरुद्धको कदमपछि निर्णय हुने अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
प्रतिबन्धको संकेतले ह्वावेको प्रतिक्रियालाई विश्वभरका संचारमाध्यमले प्राथमिकताकासाथ हेरेका छन् । अब ह्वावेले के गर्छ? सबैको प्रश्न हो । ह्वावेको एउट मूल सन्देश छ, आवश्यक परेको खण्डमा अपरेटिङ सिस्टम बनाएर उपभोक्ताको चित्त बुझाउछौं । बिहीबार नै ह्वावेका उपभोक्ता विभाग प्रमुखले ह्वावेले यसै वर्ष स्मार्टफोन र ल्यापटपको आफ्नै अपरेटिङ सिस्टमा तयार हुने बताएका छन् । “हामी अभैm पनि माइक्रोसफ्ट विन्डोज र गुगल एन्ड्रोइडप्रति प्रतिबद्ध छौं, यदि हामीले प्रयोग गर्न पाएनौं भने हुवावेले आफ्नै ओएसको प्रयोगका लागि प्लान बी तयारी गर्नेछ,” हुवावेका उपभोक्ता व्यवसायका सीईओ रिचार्ड यूले बताएका छन् । यद्यपी गुगल र माइक्रोसफ्टको सफ्टवेयर प्रयोग गर्नबाट पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने वा नलगाउने भन्ने विषयका आधारमा आफ्नो अपरेटिङ सिस्टमको विकासलाई गति दिने संकते ह्वावेको छ । वासिङटनले हुवावेलाई ९० दिनको छुट दिएको आधारमा ह्वावेले अझै निर्णय गर्न सोच्नुपर्ने बताएको हो ।
ह्वावेलाई गुगल तथा माइक्रोसफ्टको उत्पादन प्रयोग गर्नबाट स्थायी रूपमा प्रतिबन्ध लगाइएको अवस्थमामा मात्रै हुवावेको आफ्नै अपरेटिङ सिस्टम ल्याउने विषयमा जोड दिइने हुवावेका कार्यकारीले बताए । “हामी यसो गर्न चाहँदैनांै । तर, अमेरिकी सरकारका कारण हामी बाध्य हुन सक्छौं । यदि अमेरिकी सरकारले सोही बमोजिम गरेपनि यो हाम्रा लागि खराब हुनेछैन,” उनले भनेका छन्, “तर यो अमेरकी कम्पनीहरूका लागि खराब समाचार हुन सक्नेछ, किनकि हामीले अमेरिकी व्यवसायलाई सहयोग गरिरहेका छांै । आफूहरूसँग अरु विकल्प नरहेकाले एन्ड्रोइड र माइक्रोसफ्टसँग सहकार्य नभएमा आफ्नो ओएस बनाउने निर्णयमा पुग्ने देखिएको हो । एन्ड्रोइडसँगको सम्बन्ध तोडेर ह्वावेले माइक्रोसफ्टसँग साइनो गाँस्न सक्ने अवस्था आउन पनि सक्छ । चीनको थिंक ट्यांकमा सदस्य समेत रहेका माइक्रोसफ्टका संस्थापक विल गेट्स र कम्पनीका लागि आफ्नो ओएसको प्रवद्र्धनको राम्रो अवसर पनि बन्न सक्छ । तर, यो आफैमा जोखिमपूर्ण भने छ । एकातिर ब्ल्याकवेरी, नोकिया र माइक्रोसफ्टको ओएस मोबाइलमा प्रयोग गर्दा सफल देखिएका छैनन् भने एन्ड्रोइडलाई जस्तै अमेरिकन सरकारले माइक्रोसफ्टलाई पनि निर्देशन दिन सक्छ र कुनै पनि समय एन्ड्रोइड जस्तै कदम माइक्रोसफ्ट पनि चाल्न बाध्य हुन सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ ।
ह्वावे र चीनको एप्पलसँगको प्रतिस्पर्धा र सम्बन्धलाई पनि पछिल्लो घटनाक्रमको एउटा कारकका रुपमा लिन सकिन्छ । त्यसले एक खाले संचारमाध्यमहरू यस विषयमा केन्द्रीत सामग्रीमा जोड दिएका छन् । ६ महिनाअघि अमेरिकन अनुरोधमा ह्वावेकी संस्थापककी छोरी तथा फाइनान्स प्रमुखलाई क्यानडामा पक्राउ गर्दा चीनमा पनि केही अमेरिकी अधिकारीहरूमाथि चीनिया सरकारले निगरानी बढाएको थियो । यसै घटनासँग जोडेर यदी अमेरिकी कम्पनी एप्पलमाथि चीनले प्रतिबन्ध लगाए के हुन्छ? भन्ने प्रश्न पनि उठ्न थालेको छ । चीनले प्रतिबन्ध लगाएमा एप्पलको नाफा ३० प्रतिशत घट्ने हिसाब समेतका समाचार अन्तराष्ट्रिय संचारमाध्यममा आएका छन् । चीनले कम्पनीको उत्पादनमा पूरै प्रतिबन्ध लगाएमा एप्पलको नाफामा झन्डै ३० प्रतिशतले गिरावट आउने गोल्डम्यान सक्सले जनाएको छ । एप्पल फोनहरू भारी मात्रमा चीनमा उत्पादन हुन्छन् । र चीनले यस्तो कदम चालेमा डलरमा गणना गर्दा वार्षिक १५ अर्ब डलरको नोक्सानी हुनेछ ।
गोल्डम्यान सक्सका विश्लेषक रड हलका अनुसार एप्पलको आम्दानीमा चीनको हिस्सा १७ प्रतिशत रहेको छ । कम्पनीको नाफाको २९ प्रतिशत चीनमा बिक्री हुने उच्च नफा हरदै आएको छ भने उत्पादनका आधारमा एप्पलले ४५ प्रतिशतको नाफा कमाउँदै आएको अनुमान गोल्डम्यान सक्सको रहेको छ । व्यापारयुद्धकै क्रममामहिनाको सुरुमा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले २ सय अर्ब डलरका चिनियाँ सामग्रीमा भन्सार शुल्क बढाएका थिए । ट्रम्पले थप ३ सय २५ अर्ब डलरका चिनियाँ सामग्रीमा भन्सार लगाउने बताएका छन् । र यसबीच ट्रम्पले गुगल र क्वालकमजस्ता अमेरिकी फर्मलाई चिनियाँ फर्म हुवावेलाई कम्पोनेन्ट बिक्री गर्नबाट प्रतिबन्ध लगाएपछि चीनिया कदमको अनुमान गरिएको हो । यद्यपी चीनले यस्तो संकेत गरिसकेको छैन । पछिल्ला विकसित प्रसंग आफैमा प्राविधिक भन्दा पनि दुई देशका व्यापार युद्धको उपज हो । यस हिसाबले अबक दिनमा चीन र अमेरिकी सरकारका कदमल यी र यस्ता विषयलाई टुंगो लगाउनेछन् । र विश्व अर्थबजार कता जान्छ भन्ने कुरा यी दुई ठूला अर्थतन्त्रको कदम र चुनावबाट आउने मोदी सरकारको नीतिले पनि बाटो कोर्नेछ ।